Okwu & Ọnọdụ - EGay Shop
Usoro nke Ọrụ na Ọnọdụ
Usoro na ọnọdụ maka ngwaahịa ndị e rere na saịtị https://egay.shop.
Nkeji edemede 1 - Ihe
Usoro ndị a na ọnọdụ na-achịkwa ahịa site n'aka Egay Shop na https://egay.shop.
Egay ụlọ ahịa na-ejikwa weebụsaịtị a. Na saịtị ahụ, okwu "anyị", "anyị" na "anyị" na-ezo aka Enwoke nwere mmasị nwoke ụlọ ahịa. Enwoke nwere mmasị nwoke ụlọ ahịa na-enye weebụsaịtị a, gụnyere ozi niile, ngwá ọrụ na ọrụ dị site na saịtị a, gị onye ọrụ, na-adabere na ịnakwere nke okwu niile, ọnọdụ, atumatu na ọkwa dị na ebe a.
Nkeji edemede 2 - Ụlọ Ahịa Ụlọ Ahịa
Nkwebi ma ọ bụ imebi nke ọ bụla n'ime Okwu ndị a ga-eme ka nkwụsị ọrụ gị ozugbo
Nkeji edemede 3 - Ọnọdụ zuru oke
Nkeji edemede 4 - Eziokwu, Mmezu na oge nke Ozi
Nkeji edemede 5 - Ahịa
Ọnụahịa nke ngwaahịa anyị na-egosi na Euro niile ụtụ isi gụnyere (VAT na ụtụ isi ndị ọzọ dị na ụbọchị nke iwu), ma ọ bụrụ na egosiri na ewepu nhazi na mbupu. N'ihe banyere iwu na mba ọzọ karịa obodo ukwu France ị bụ onye na-ebubata ngwaahịa ahụ. A na-akwụ ụgwọ ọrụ agbụrụ ma ọ bụ ụtụ isi ụtụ isi obodo ma ọ bụ mbubata ma ọ bụ ụtụ isi obodo. Ikike ndị a na ego ndị a abụghị ọrụ nke Enwoke nwere mmasị nwoke ụlọ ahịa. Ha ga-abụ ụgwọ ọrụ gị, ọ bụkwa naanị gị ka ha ga-esi na-ekwupụta ọkwa na ịkwụ ụgwọ nye ndị ọchịchị na ahụike nke mba gị. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị jụọ ndị nwe obodo gị banyere ihe ndị a. Iwu niile n'agbanyeghị na ha sitere na Euro. Enwoke nwere mmasị nwoke ụlọ ahịa nwere ikike ịgbanwe ego ya n'oge ọ bụla, mana ngwaahịa ahụ ga-edebere na ndabara tarifu na ike n'oge nke nkwado nke iwu na idobe ka nnweta. Ngwaahịa ahụ nọgidere bụrụ ihe onwunwe nke ọha mmadụ Enwoke nwere mmasị nwoke ụlọ ahịa ruo mgbe ịkwụ ụgwọ zuru ezu nke ụgwọ ahụ. Ịdọ aka ná ntị: ozugbo ị na-eburu ihe ndị ahụ enyere n'iwu, enwere ike ịnwụ ma ọ bụ mebie ngwaahịa ndị ahụ.
Nkeji edemede 6 - Ngbanwe maka Ọrụ na Ahịa
Nkeji edemede 7 - Ngwaahịa ma ọ bụ Ọrụ
Nkeji edemede 8 - Iwu
Ị nwere ike ịhazi:
Na Intanet: https://egay.shop
Akwukwo mgbasa ozi ahu ka edere n'asusu Bekee ma kwenye na ihe kachasi anya n'oge emere nkwado nke iwu gi. Enwoke nwere mmasị nwoke ụlọ ahịa nwere ikike ịdenye aha ịkwụ ụgwọ, ma ghara ikwenye ihe ọ bụla maka ihe ọ bụla, karịsịa ma ọ bụrụ na enwere nsogbu, ma ọ bụ na ọ bụ ihe isi ike banyere usoro ahụ.
Nkeji edemede 9 - nkwado nke iwu gị
Usoro ọ bụla nke na-egosi na weebụsaịtị https://egay.shop na-abanye na Usoro na Ọnọdụ dị ugbu a. Nkwenye ọ bụla na-egosi na ị kwadoro njedebe zuru ezu na zuru ezu na ọnọdụ izu ahia ugbu a, na-enweghị ihe ma ọ bụ idobe. Ihe ndekọ data niile na nkwenye ederede ga-abụ ihe akaebe nke azụmahịa ahụ. Ikwuputa na i nwere ihe omuma zuru oke. Ntụziaka nke iwu ga-aba uru ịbanye na ịnakwere arụmọrụ a rụrụ. A nchịkọta ihe ọmụma nke usoro ị ga-enye gị site na adreesị ozi-e nke nkwenye nke usoro gị.
Nkeji edemede 10 - Ịkwụ Ụgwọ
Eziokwu nke ịkwado iwu gị na-egosi gị ọrụ ị ga-akwụ ụgwọ a tụrụ anya. Ụgwọ nke ịzụrụ gị na-eme site na kaadị akwụmụgwọ na SSL ezoro ezo nzuzo protocol.
Nkeji edemede 11 - Nkwụghachi, laghachi & mgbanwe
Usoro iwu anyị bụ ụbọchị 30. Ọ bụrụ na ụbọchị 30 agafeela kemgbe ịzụrụ gị, ọ dị mwute ikwu na anyị agaghị enye gị nkwụghachi ma ọ bụ mgbanwe.
Ihe ndị a na-adịghị eweghachite:
E nwere ọnọdụ ụfọdụ ebe ọ bụ naanị nkwụghachi azụ na-akwụ ụgwọ:
Ihe ọ bụla na-adịghị na ọnọdụ mbụ ya, mebiri ma ọ bụ na-efu akụkụ maka ihe ndị na-abụghị n'ihi njehie anyị
Ihe ọ bụla a laghachiri karịa 30 ụbọchị mgbe nnyefe
Ọ bụrụ na a kwadoro gị, a ga-edozi nkwụghachi gị, na akwụmụgwọ ga-etinye aka na kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ ụzọ mbụ ịkwụ ụgwọ, n'ime ụbọchị ụfọdụ.
Nkwụghachi azụ ma ọ bụ na-efu:
Ọ bụrụ na i meela ihe a niile ma ị ka anatabeghị nkwụghachi gị, biko kpọtụrụ anyị site na ịpị EBE A.
Ịghaghachi ihe nkwụghachi ihe na-adabere na ire ere.
Anyị na-ehichapụ ihe ma ọ bụrụ na ha nwere nkwarụ ma ọ bụ mebiri emebi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwere ya maka otu ihe, zigara anyị email na hello@egay.shop.
Ọ bụrụ na akara ahụ dị ka onyinye mgbe a zụrụ ma zipu gị ozugbo, ị ga-enweta onyinye amara maka uru nke nloghachi gị. Ozugbo a natara ihe a laghachiri, a ga-ezitere gị akwụkwọ onyinye.
Ọ bụrụ na ejighị akara ahụ dị ka onyinye mgbe a zụrụ ya, ma ọ bụ onye nyere onyinye nyere iwu ka ha nye gị ka e mesịrị, anyị ga-eziga nkwụghachi na onye nyere onyinye ma ọ ga-achọpụta nlọghachi gị.
Ị ga-akwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ nke gị maka ịlaghachi ihe gị. Mbupu ego a na-akwụ na-abụghị ihe nkwụghachi ụgwọ. Ọ bụrụ na ịnweta nkwụghachi, a ga-esi na nkwụghachi gị kwụghachi ụgwọ nke mbupụghachi.
Dabere na ebe ị bi, oge ọ ga-ewe maka ị gbanwere ngwaahịa iji bịakwute gị, nwere ike ịdị iche.
Ọ bụrụ na ị na-ebufe ihe karịrị $ 75, ị ga-atụle iji ọrụ mbupu ebubo ma ọ bụ ịzụta mkpuchi ụgbọ mmiri. Anyị anaghị ekwe nkwa na anyị ga-enweta ihe ị laghachiri.
Nkeji edemede 12 - Nnweta
A na-enye ngwaahịa anyị ọ bụrụhaala na a na-ahụ ha na weebụsaịtị https://egay.shop na n'ime oke nke ebuka dị. Maka ngwaahịa ndị na-abụghị ngwaahịa, onyinye anyị bụ ihe doro anya na nnweta na ndị na-ebute anyị. Ọ bụrụ na enweghi ike inweta ngwaahịa mgbe ị debere iwu gị, anyị ga-agwa gị email. A ga-eme ka iwu gị kagbuo ya na akpaghị aka ma ọ bụrụ na ọ gaghị akwụ ụgwọ ụlọ akụ.
Nkeji edemede 13 - Nnyefe
A na-ewepụta ngwaahịa ahụ na adreesị nnyefe a gosipụtara n'oge usoro iwu ahụ, n'ime oge egosiri na peeji nke nkwenye. Ọ bụrụ na ị gafere ngwa ngwa, a ga-ezipụ ozi ịntanetị iji kọọrọ gị ihe ga-esi na ya pụta n'oge oge ezigara nke enyere gị aka. Ọ bụrụ na onye ọrụ ụgbọelu na-enyefe ya, Egay ahịa agaghị enwe ike iburu ya ebubo maka mbubata oge na-abịa n'ihi enweghị ike ịnweta onye ahịa mgbe ọtụtụ aro maka ọkwa. N'ihe banyere nnyefe n'èzí European Union, ụtụ ndị ọzọ nwere ike itinye n'ọrụ site na omenala na ntinye obodo nke onye natara ya. Ụtụ isi a bụ ọrụ nke onye na-anata iwu.
Nkeji edemede 14 - Eziokwu nke Ịgba Ụgwọ na Ozi Akaụntụ
Nkeji edemede 15 - Nhọrọ Ngwa
Anyị nwekwara ike, n'ọdịnihu, na-enye ọrụ ọhụrụ na / ma ọ bụ atụmatụ site na ebe nrụọrụ weebụ (gụnyere, ntọhapụ nke ngwaọrụ ọhụrụ na ihe onwunwe).
Ụdị njirimara na / ma ọ bụ ọrụ ọhụrụ ndị a ga-edozi n'okpuru Usoro Usoro Ọrụ a.
Nkeji edemede 16 - Nke atọ-Party Njikọ
Akwụghị anyị ụgwọ maka nsogbu ọ bụla ma ọ bụ mmebi metụtara ịzụta ma ọ bụ iji ngwaahịa, ọrụ, ihe onwunwe, ọdịnaya, ma ọ bụ azụmahịa ọ bụla ọzọ metụtara na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Biko nyochaa nlezianya atumatu na omume ndị ọzọ ma hụ na ị ghọtara ha tupu ị banye n'ahịa ọ bụla.
Mkpesa, azọrọ, nchegbu, ma ọ bụ ajụjụ gbasara ngwaahịa ndị ọzọ ga-eduzi ndị ọzọ.
Nkeji edemede 17 - ntuziaka onye ọrụ, nzaghachi na ntinye ndị ọzọ
Ị kwenyere na ihe ị na-ekwu agaghị emebi ikike ọ bụla nke ọ bụla ọzọ, gụnyere nwebisiinka, ụghalaahia, nzuzo, àgwà ma ọ bụ ikike onwe onye ma ọ bụ ikike. Ị kwenyere na ihe ndị ị ga - ekwu agaghị enwe nnwere onwe ma ọ bụ n'ụzọ iwu akwadoghị, okwu mkparị ma ọ bụ ihe rụrụ arụ, ma ọ bụ nwee kọmputa ọ bụla ma ọ̄ bụ malware ndị nwere ike n'ụzọ ọ bụla emetụta ọrụ nke Ọrụ ma ọ bụ weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya. Ị nwere ike ghara iji adreesị ozi-e ụgha, mee ka à ga-abụ onye ọzọ karịa onwe gị, ma ọ bụ ma ọ bụ na-eduhie anyị ma ọ bụ nke atọ ọzọ dịka mmalite nke ihe ọ bụla. Naanị gị bụ maka ihe ọ bụla ị kwuru na ha ziri ezi.
Anyị enweghị ibu ọrụ ọ bụla ma ghara itinye ụgwọ maka ihe ọ bụla ị kwuru ma ọ bụ nke ọ bụla ọzọ.
Nkeji edemede 18 - Ozi Nkeonwe
Nkeji edemede 19 - Njehie, Enweghị ike na Ntinye
Anyị agaghị arụ ọrụ ọ bụla iji melite, gbanwee ma ọ bụ dokwuo anya ozi na Ọrụ ma ọ bụ na weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya, gụnyere enweghị njedebe, ozi ọnụahịa, ma e wezụga iwu achọrọ.
Enweghị mmelite ma ọ bụ ntanye emetụtara na Ọrụ maọbụ na weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya, ekwesịrị igosi na ozi niile dị na Ọrụ maọbụ na weebụsaịtị ọ bụla metụtara ya agbanweela ma ọ bụ emelite.
Nkeji edemede 20 - Amachibidoro iji
Nkeji edemede 21 - Nwepu ikike nke akwụkwọ ikike; Ịkwụsị ụgwọ
Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ bụla, Egay Shop, ndị isi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ndị ụlọ ọrụ, ndị na-eweta ọrụ, ndị na-ahụ maka ọrụ ma ọ bụ ndị ikikere nwere ike ịdaba maka mmerụ, ọnwụ, nkwupụta, ma ọ bụ ihe ọ bụla kpọmkwem, ma ọ bụ ọdachi ọ bụla na-abaghị uru nke ụdị ọ bụla, gụnyere, na-enweghị njedebe uru efu, ego furu efu, ego furu efu, enweghị data, ụgwọ mgbapụta, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri emebi, ma ọ bụ ịdabere na nkwekọrịta, ahụhụ (gụnyere nleghara anya), ọrụ siri ike ma ọ̄ bụ n'ụzọ ọzọ ojiji nke ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla a na-eji ọrụ ahụ, ma ọ bụ maka nkwupụta ọzọ ọ bụla metụtara n'ụzọ ọ bụla maka ojiji nke ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, gụnyere, ma ọ bụghị njedebe na, ọ bụla njehie ma ọ bụ ihe ọ bụla n'ime ihe ọ bụla, ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ mmebi nke ụdị ọ bụla e mepụtara n'ihi ọrụ nke ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla (ma ọ bụ ngwaahịa) ezitere, transmitted, ma ọ bụ nke ọzọ mepụtara site na ọrụ ahụ, ọ bụrụgodị na ọ gwara ha ka ha nwere ike.
N'ihi na ụfọdụ na-ekwu ma ọ bụ ndị ọchịchị anaghị ekwe ka mwepụ ma ọ bụ njedebe nke ọrụ maka ọdachi ma ọ bụ ọdachi, na ụlọnga ma ọ bụ ikike ndị a, ibu ọrụ anyị ga-ejedebe na iwu kachasị oke.
Nkeji edemede 22 - Mgbapụta
Ị kwenyere ikwenye, chebe ma jide Egay ahịa na-adịghị emerụ ahụ na ndị nne na nna, ndị enyemaka, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị isi ọrụ, ndị nduzi, ndị ọrụ, ndị ọrụ ngo, ndị ọrụ ikikere, ndị na-ahụ maka ọrụ, ndị na-ere ahịa, ndị na-azụ ahịa, ndị ọrụ na ndị ọrụ. ndị ikpe iwu kwadoro, nke onye ọ bụla nke atọ mere ma ọ bụ na-esite na mmebi iwu gị ma ọ bụ ihe ha na-etinye na ya, ma ọ bụ mmebi nke iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.
Nkeji edemede 23 - Severability
Nkeji edemede 24 - Nchupu
Nkeji edemede 25 - Nkwekọrịta niile
Nkeji edemede 26 - Obu
Ngwa ndị ahụ a chọrọ ka ha na-agbaso iwu French dị ike. Ibu ọrụ nke Egay Shop enweghị ike itinye aka na ikpe na-akwadoghị iwu nke mba ebe eburu ngwaahịa ahụ. Ọ bụ ọrụ gị ịlele ndị ọchịchị obodo ahụ na ị nwere ike ịbubata ma ọ bụ jiri ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị chọrọ ịtụ. Na mgbakwunye, Egay Ụlọ ahịa enweghi ike ijide ya maka mmebi nke na - eji ihe eji azụta ya eme ihe. N'ikpeazụ, ọrụ nke Egay Ụlọ ahịa enweghị ike ịdabere maka nsogbu ọ bụla ma ọ bụ imebi ihe na-ejighị ya na Ịntanetị, gụnyere nkwụsịtụ ọrụ, intrusion mpụga ma ọ bụ ọnụnọ nke nje kọmputa.
Nkeji edemede 27 - Iwu bara uru n'okwu ikpe
Usoro okwu a na nkwekọrịta ọ bụla dị iche iche anyị na-enye gị Ọrụ ga-achịkwa ma kọwaa dịka iwu nke France.
Asụsụ nke nkwekọrịta a bụ Bekee. Ọnọdụ ndị a maka ire ere bụ iwu iwu French. N'ọnọdụ nke esemokwu, ụlọikpe ndị France ga-abụ naanị ndị nwere ike.
Nkeji edemede 28 - ihe onwunwe aka
Ihe niile dị na saịtị ahụ bụ https://egay.shop bụ ma na-anọgide na-enwe ọgụgụ isi na nke nanị nke Egay Ụlọ ahịa ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ikike Egay Ụlọ ahịa iji ha mee ihe. Enweghị onye ikike ka mụta nwa, eji, rebroadcast, ma ọ bụ jiri maka nzube ọ bụla, ọbụna n'akụkụ ụfọdụ, ihe nke saịtị ahụ bụ ngwanrọ, anya ma ọ bụ ụda. Enwere ike igbochi njikọ ọ bụla dị mfe ma ọ bụ hypertext na-enweghị nkwenye ederede kwupụtara Egay Ụlọ ahịa . Ihe kpatara ya maka ngwaahịa ndị egosipụtara dị ka ndị dị otú ahụ na nkọwa ha bụ ihe ọgụgụ isi na nke nanị nke Egay Ụlọ ahịa. Onye ọ bụla ma ọ bụ onye iwu na-edegharị ihe niile ma ọ bụ akụkụ nke atụmatụ ndị a nwere ike ikpe ikpe.
Nkeji edemede 29 - Gbanwee na Usoro nke Ọrụ
Nkeji edemede 30 - Ozi kọntaktị
A ga-ezigara anyị ajụjụ banyere Usoro nke Ọrụ site na ịpị EBE A.